नवलपरासीको माओवादी र्‍यालीमा बम बिस्फोट, बालकसहित पाँचजना घाईते
माओवादी केन्द्रको चुनावी सभामा जाँदै गरेका कार्यकर्ता बोकेको बसलाई लक्षित गरी नवलपरासीको सुनवलमा आईतबार भएको बम विस्फोटमा परी एक बालकसहित पाँचजना घाईते भएका छन्। घाईतमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नवलपरासीको सुनवलबाट भूमहीतर्फ माओवादी कार्यकर्तालाई बोकेर जाँदै गरेको लु. १ ख ६७७३ नं. को बस उक्त बम विस्फोटमा परेको थियो। उक्त बस सुनवल ८ स्थित सोमनाथ पुलमा पुग्ने वित्तिकै विष्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले विष्फोटको प्रकृती हेर्दा पुलमा टाईम बम जडान गरिएको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन्। विष्फोटबाट बसका झ्यालका सीसा र सिट क्षतिग्रस्त भएका छन्।
घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलबाट करिब २ सय मिटर पूर्व राजमार्ग छ। विष्फोटमा परी बस चालक बर्दघाट नगरपालिका चिसापानीका नरबहादुर वि.क. घाइते भएका छन्। घाईते हुने अन्यमा फूलकुमारी कठरिया, मिना चौधरी, १४ वर्षिया श्रीकान्त केवट, लेखनाथ सुवेदी र बेलकुमारी कठरिया रहेका छन्।
उनीहरु सबै सुनवल नगरपालिका भतौडी गाउँका हुन्। घाईते मध्ये लेखनाथ सुबेदी र बेलकुमारीको अवस्था गम्भीर छ । सुवेदीको बुटवलमा उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौं पठाईएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्की गम्भीर बेलकुमारीको लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी १४ वर्षिय श्रीकान्तको दाहिने छातीमा चोट लागेको छ। घाईते अवस्थामा रहेका श्रीकान्तले छिमेकी दाईहरुले आमसभामा हिड्न भनेपछि बस चढेर जाँदा बम बिस्फोटमा परेको बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भएको घटनाका कारण एक घण्टा सवारी आगमन ठप्प बनेको थियो ।
घाईते सँगै अस्पतालमा रहेका माओवादी जनसांस्कृतिक फाँटका कार्यकर्ता खड्क बस्नेतले माओवादी केन्द्रको विजय नचाहने तत्वहरुले आफूहरूमाथि घटना घटाएको प्रतिकृया दिए।
यो सँगै चार दिनको अवधिमा नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा पाँच वटा आगजनी र विष्फोटका घटना भएका छन्। चुनाव विरोधीका ती घटनामध्ये चार वटा माओवादी केन्द्र लक्षित छन्। पछिल्लो पटक आईतबार मानवीय क्षति हुने गरी सुनवलमा बम विष्फोट भएको छ।
सबै घटना नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले गराएको आशंका प्रहरीले गरेको छ । सबै घटना राजमार्गको सुनवल र बर्दघाट नगरपालिकामा भएका हुन्।
प्रदेश नम्बर ५ को परासी क्षेत्रका तीन नगरपालिकार चार गाउँपालिकामा असार १४ गते निर्वाचन हुँदै छ । बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तह दक्षिण क्षेत्रमा छन् ।
चार दिनअघि चुनाव प्रचारका लागि राखिएको माओवादी केन्द्रको जिप माथि सुनवल नगरपालिकाको बडेरामा आगजनी गरिएको छ । आगजनीबाट जिप क्षतिग्रस्त भएको छ ।
शुक्रबार बर्दघाट नगरपालिकाको पञ्चनगरमा पनि जिपमाथि आगजनी गरिएको भएको छ । त्यसैगरी आईतबार बर्दघाट नगरपालिकाका माओवादी केन्द्रका मेयर रुद्रप्रकाश उपाध्यायको घर अगाडि राखिएको बम सेनाको डिस्पोजल टोलीले निष्कृय पारेको थियो। उपाध्यायको घर कमाउण्ड छेउमा राखेको बमबारे अवेरसम्म कसैले जानकारी पाएका थिएनन् ।
बिहान करिब ११ बजे अज्ञात नम्बरबाट उपाध्यायलाई फोन गरेर बम राखेको जानकारी दिइएको थियो। पाँच वटा घटनामध्ये एउटा घटना एमाले विरुद्ध गरिएको छ। शुक्रबार बर्दघाट नगरपालिकामा एमालेबाट मेयर पदमा उम्मेदवार दिएका धिरज शर्माको घरमा बम राखिएको थियो । उक्त बमलाई सेनाको टोलीले निष्कृय बनाएको थियो।
एमाले चुनावी सभालाई लक्षित गर्दै बुटवलको ट्राफिक चोकमा राखिएको विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको छ।
यता एमाले बुटवल उपमहानगरपालिका निर्वाचन परिचालन समितिले आईतबार बुटवलमा चुनावी सभा आयोजना गरेको थियो।
अध्यक्ष ओलीले सभालाई सम्बोधन गरेर फर्किए लगत्तै उक्त बिस्फोटक बस्तु फेला परेको थियो ।
कार्यक्रममा मञ्च निर्माण गरिएको स्थान छेउमै रहेको विद्युत ट्रान्समिटर नजिकै कालो झोलामा भेटिएको उक्त बिस्फोटक पदार्थ कार्यक्रम सकिए लगत्तै डिस्पोज गरिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले सेतापाटीलाई जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार ११, २०७४ ०३:२४:०८